Akanjo ho an'ny lehilahy, Palitao milomano, Akanjo lehilahy - Hengqianxiang
Fampiononana, Fahombiazana avo lenta, zava-baovao
Lehilahy mafana amin'ny ririnina mafana akanjo fitafy mahazatra Padde ...
Shell 100% polyester Lining 100% polyester mameno gana 90%, volom-borona 10% habe azo atao loko misy loko misy hafa Misy volony rakotra volon-koditra hafa Fampidirana vokatra Tena mafana ny palitao mitafy ririnina. Ny volavolan'ny firavaka amin'ny loko mifanohitra dia mahatonga ny palitao ho tanora kokoa. Volon-koditra tena mena mitazona ny rivotra. Ny vokatra dia manana kinova Super mafana sy mafana.
Akanjo ambongadiny Lehilahy Factory Akanjo Fashional ...
Shell 100% polyester Lining 100% polyester mameno gana 90%, volom-borona 10% Misy habe azo atao loko Misy loko misy Fampidirana ny vokatra Ny palitao fohy midina dia maivana, malefaka sy mafana. ny volon'ondry volon'ondry malaza. Ny vokatra dia manasongadina lanja maivana, ahazoana aina, kanto.
Factory mpanamboatra lehilahy akanjo mahazatra manao akanjo Sh ...
Shell 98% landihazo, 2% polyester Mametaka poliester 100%, volon'ondry manahafao Mameno polyester 100% habe Mety misy loko misy loko Misy loko misy Fampidirana vokatra Lamba landihazo tsara kalitao avo lenta ny palitao. Ny palitao dia tonga amin'ny famirapiratana mamirapiratra izay mifanaraka amin'ny vatanao tanteraka, ary mahatonga anao ho mendrika sy kanto. Volon'ondry 50% hahatonga anao hahatsapa ho mafana amin'ny ririnina na amin'ny fararano. Ny vokatra dia manasongadina Stylish, mafana, windproof, maivana maivana ary entana mafana.
Mpanamboatra orinasa Fitafiana Lehilahy Lehilahy Menavola Formal Short
Shell 100% polyester Lining 100% polyester mameno 100% polyester habe misy habe azo misy loko Misy loko misy Fampidiran-drongony lamba volon'ondry tsara kalitao atao kilasy avo lenta. Ny palitao dia tonga amin'ny famirapiratana mamirapiratra izay mifanaraka amin'ny vatanao tanteraka, ary mahatonga anao ho mendrika sy kanto. Volon'ondry 50% hahatonga anao hahatsapa ho mafana amin'ny ririnina na amin'ny fararano. Ny endri-javatra dia ny dikan-teny tsara, mahazaka rivotra, mafana.
Lehilahy akanjo fitafiana ara-dalàna akanjo palitao lava
Shell 100% landy manarona 100% polyester habe misy habe azo misy loko misy loko misy Fampidirana vokatra Volavolan-tratra roa, ravaky fehikibo. Ny kinova lava sy lava dia mampitovy endrika anao amin'ny endriny mahafinaritra. Ny palitao lava beige dia fomba mahazatra tsy miato. Ny endri-javatra dia ny dikan-teny tsara, mahazaka rivotra, mafana.
100% Polyester Windproof Wind Custom Men Short Bombe ...
Shell 100% polyamide Lining 100% polyester Size habe azo misy loko misy loko misy Fampidiran-drongony Ity akanjo ity dia misy fantsona mainty, ary maneho taratra fanavaozana sy fijoroana ankehitriny. Ny paosy misy zipper amin'ny sandry dia napetraka manokana, ary manampy funk amin'ny akanjo tsotra. Vita amin'ny lamba vita amin'ny rano tsy miova sy tsy misy rivotra ary tsara ho an'ny akanjo ivelany sy mahazatra. Ny vokatra dia misy tantera-drano sy tsy misy rivotra, maina vetivety.
Fivarotana mafana amin'ny ririnina vehivavy akanjo lamaody midina C ...
Shell 100% polyamide Lining 100% polyester mameno gana gana 90%, volom-borona 10% habe azo atao loko Na loko inona na misy hafa Fampidirana vokatra Ny Jacket Down mavokely mamiratra dia natao tsara hiadiana amin'ny ririnina mahery nefa tsy milanja ny mpitafy azy. Ny palitao dia ampidirina amin'ny teknolojia maina maina miaraka amin'ny fanoherana tsara indrindra ny rano ary ny fanoherana fatratra ny fahaverezan'ny hafanan'ny vatana. Ny fitaovan'ny palitao dia azo alain-tahaka sy azo ovaina alohan'ny mora da ...
Palitao fanamiana fanatanjahan-tena ambongadiny wome ...
Fampidirana ny vokatra Ity palitao fanatanjahan-tena ity dia tena ahazoana aina ho an'ny any ivelany. Ny zipper koa tsy misy rano. Tsy misy olana ny orana maivana any ivelany. Ny lamba manafosafo dia mamela ny hatsembohana hidina haingana. Paosy tratra mety. Endri-javatra vokatra 1. Maharitra sy mahazo aina. 2. Azo velarina. 3. Ny lanja maivana sy ny zavatra mafana.4, tsara ho an'ny hetsika ivelan'ny trano amin'ny lohataona sy ny fararano izany. Raha tianao ny loko, dia mety aminao ity palitao ity. Ny j ...
Vidin'ny orinasa mifaninana. Mifehy ny vidin'ny ampahany rehetra izahay mba hanomezana anao ny vidiny tsara indrindra.
Afaka mamokatra kaomandy kely sy baiko mifangaro izahay.
Aorian'ny fanamafisanao ny santionany sy ny baiko dia afaka mandefa ny entana ao anatin'ny 30 andro izahay.
Serivisy fanamboarana lalina
Afaka manampy anao hampivelatra ny fombanao vaovao arakaraka ny foto-kevitra na ny kanto.
Fahatsorana, tompon'andraikitra, fandresena
Inona no hitranga amin'ny lamba sy garme ...
Ny varotra lamba sy akanjo any Sina dia tsy fahita tamin'ny tapany voalohan'ity taona ity noho ny fiparitahan'ny COVID-19. manerantany. Ny toe-javatra ankapobeny ao amin'ny ...
Sakafo hariva an'ny mpiasa alohan'ny Fetin'ny Lohataona 2020, ...
Amin'ny faran'ny taona 2019 dia hamintina ny sanganasa tamin'ny taon-dasa izahay, amin'ny alàlan'ny fanamafisana manokana ny olana amin'ny asa, ary avelao ny tsirairay hahatadidy ny hanao asa tsara kokoa amin'ny Taom-baovao. Manana mpamorona kinova t ...
Kalitao Voalohany, mpanjifa lohalaharana